Kupfuura makumi maviri kubva muzana eedu Peji Peji Mapepa Anouya kubva kuChimwe Chinhu | Martech Zone
China, Kurume 10, 2016 China, Kurume 10, 2016 Douglas Karr
Takanyoresa Hotjar uye takaita zvimwe heatmap kuyedza pane peji redu rekumba. Iyo peji rakaringana repamba rine yakawanda zvikamu, zvinhu, uye ruzivo. Chinangwa chedu hachisi chekukanganisa vanhu - ndechokupa peji rakarongeka apo vashanyi vanogona kuwana chero chavari kutsvaga.
Asi ivo havasi kuiwana!
Tinoziva sei? Vanopfuura makumi maviri muzana% yekubata kwese pamapeji edu epamba kunobva kwedu bhaa yekutsvaga. Uye mukuongorora yasara peji redu, vashanyi havawanzo kupururudza uye nekudyidzana vachiwedzera pasi peji redu. Kusarudzika ndekwekuti vashanyi vazhinji vanoenda kunotsika kwedu.
Isu takaita Swiftype yebasa redu rekutsvaga mukati. Inopa robust autosuggest mashandiro, kuburitsa kwakakura, uye isu tine imwe toni yezvimwe zvinhu zvatingaite pane ino saiti nayo.
Zvisinei nekuti yako saiti yakarongedzwa zvakadii, marongero ako ekufambisa akarongeka, vashanyi vanoda kutonga pamusoro pezviitiko zvavo uye vanoda hukuru hwemukati hwekutsvaga nzira yekuwana izvo zvandinoda. Sezvo isu tichishanda nemakambani anoburitsa nguva nenguva, kuve neyakaomarara uye intuitive yekutsvaga mashandiro inofanirwa. Kana usiri kushandisa tsvaga sevhisi chishandiso, ita chokwadi chekushandisa yemukati yekutsvaga kutsvaga mune yako analytics. Nekufamba kwenguva, iwe unotora zvakare rumwe ruzivo rwakanakisa pamisoro iri kutsvaga vashanyi vako yausina kuburitsa zvemukati.
Tags: tinya kuongororaheatmapmusha pejimarongero epeji repambahotjarkutsvaga kwemukatitsvaga sevhisiTsvaga Kutengesaswiftype
Inobudirira Musika yekutengera Ngarava Inonyengedza
Icho ichokwadi. Kune dhizaini zvirinani kuratidza semauch anoyevedza kune mavatengi ma link sezvazvinogona. Kwete nguva dzose vatengi vanotsvaga "yakanakisa-kukambani" chikamu chewebsite yewww.